ရင်ထဲမှာ – Grab Love Story
သူဆီက.. စာအုပ်ကို.. ငှါးခိုင်းတာဆိုပြီး.. လိမ်တောင်းတာ.. သူကလည်း ပေးလိုက်တယ်။ နောက်နေ့ကျ.. သူစာအုပ်ထဲ.. ရည်းစားစာ ထည့်ပေးလိုက်တာ။ ပေးတုန်းကတော့.. ဟုတ်နေတာပဲ။ နောက်ရက်များကြတော့.. မျက်နှာပူတာနဲ့.. ရှောင်နေလိုက်တယ်။ တပတ်လောက်ကြာတော့.. ကျတော့စာကို ကျတော့ပြန်ပေးတယ်ဗျ။ အဲဒီကြားထဲ.. ထွေးထွေးက.. ဘယ်သူ့ရည်းစား.. ဘယ်ဝရည်းစားနဲ့.. ကြားနေရတာ.. စုံလို့။ ကျတော်လည်း.. စိတ်ရှုပ်တာနဲ့.. ဆက်မလိုက်ဖြစ်တော့ဖူး။ နောက်ပိုင်းကျတော့.. ကျတော့ရှေ့မှာ.. ကိုယ်ယောင်ပြလာတယ်ဗျ။ အခြေအနေ ကောင်းလာတဲ့သဘောပေါ့။ တနေ့..ထွေးထွေး..စက်ဘီးနဲ့ ပြန်သွားတာကို.. ရုတ်တရက်တွေ့လိုက်တယ်။ ဘယ်ရမလဲ.. ကျတော့စီးတော် စက်ဘီးပေါ် တက်ခွလိုက်တာပေါ့။ (စီးတော်စက်ဘီး ခက်ဆစ်အဖွင့်= သူများတွေလို.. ဂျပန်ဘီး၊ မိချောင်းဘီး.. မစီးနိုင်လို့.. မောင်ဗမာဘီးကို .. မားဂတ်.. ချိန်းဖုံး. အကုန်ဖြုတ်ပြီး .. ဆေးမှုတ်စီးရတဲ့ဘီး… ဟားဟား) ချက်ချင်းလိုက်တော့တာပဲ။ ရွာလမ်းဆိုတော့.. ဖုန်တလောင်းလောင်းနဲ့ပေါ့။ ဘယ်ရမလဲ.. ရှေ့က.. ပိတ်ရက်ပြီး.. အဖြေပေးမလား… မပေးရင်.. မဖယ်ပေးဘူး.. လုပ်ပလိုက်တာပေါ့။ အဲအခါကျမှ.. ထွေးထွေးက… လာမဲ့ကြာသာပတေး မှာ ပေးမယ်တဲ့.။ ပျော်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်း.။ ကြာသာပတေးနေ့လဲ ရောက်ရော “မင်းမင်းကို.ချစ်တယ်” (မင်းမင်းရဲ့ထွေး)ဆိုပြီး.. sign.. တောင်းထိုးလိုက်သေးတယ်။ ပျော်ပြီယေ.။
လရောင်ကြောင့်.. ဝင်းပနေတဲ့.. ထွေးထွေးမျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီး.. နှုတ်ခမ်းလေးကို.. စုပ်လိုက်ပါတယ်။ လက်ကလည်း အငြိမ်မနေပဲ.. ရင်သားတွေကို.. အကျီ င်္ပေါ်ကနေ ပွတ်ပေးနေတယ်။ နှိပ်ကြယ်သီးလေးတွေကို. .”ထောက်.. ထောက်” အသံမည်အောင်.. ဖြုတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့.. ဘော်လီအောက်.. လက်လျှိုပြီး.. နို့သီးလေးတွေကို.. စမ်းပြီး.. တလှည့်စီ ချေပေးလိုက်တယ်။ ထွေးထွေး.. တော်တော်လေး. မျောနေပြီး.. ထမီအထက်သို့လှန်ပြီး.. စောက်ဖုတ်ကို ပွတ်လိုက်တယ်.။ ထွေးထွေး စောက်ဖုတ်.. မို့မို့ဖောင်းဖောင်း.. မဟုတ်ပဲ.. ပေါင်နှစ်လုံးကြားပျောက်နေသလိုပဲ။ မတက်တတက်နဲ့ ကလိပေးနေပေမယ့်.. ညည်းသံလေးတွေ ကြားနေရတယ်။ စောက်ခေါင်းပေါက်လို့ ထင်ရတဲ့နေရာကို လက်ခလယ်နဲ့.. ထိုးကြည့်သေးတယ်။ မဝင်ဘူး.. အဲဒါနဲ့ပဲ.. အပေါ်ယံပွတ်ပေးလိုက်တာ.. အရည်တွေ ထွက်လာတယ်။ ထွေးထွေးကို.. အသာလေးလှဲလိုက်ပြီး… ပေါင်နှစ်ကြား.. ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ ပုဆိုးကို လှန်ပြီး.. စောက်ခေါင်းပေါက်ကို.. လိုးထည့်တာ.. မဝင်ဘူး။ ထွေးထွေးက.. သူ့လက်သွယ်သွယ်လေးနဲ့. ကျတော့လီးကိုကိုင်ပြီး.. သူ့အဖုတ်ဝမှာ တေ့ပေးတယ်။
ကျတော်လည်း သူတေ့ပေးတာနဲ့.. ဆောင့်ထည့်လိုက်တော့.. ”’အိုး..အား..ဘုရား..ဘုရား..အမလေး..အမလေးလေး…. ဟင်း..မရဘူး..မရဘူး… မလုပ်ပါနဲ့တော့.. မင်းမင်းရယ်.”” “”ထွေးထွေးရယ်..တခါတည်းပါ..အောင့်ခံနော်..”’ ပြောရင်း..ထပ်ဆောင့်လိုးထည့်လိုက်တယ်။ “”အားးးးးး…အမေ့ရေ..နာတယ်..မလုပ်ပါနဲ့..မလုပ်ပါနဲ့..”” ဆိုပြီး..ငိုသံပါလေးနဲ့ပြောနေတယ်။ ကျတော်က မရဘူး.. ရတဲ့အခွင့်အရေး လက်လွတ်မခံချင်တော့ ရောက်လက်စမှာ.. ခဏလေးမှိန်းနေတယ်။ ထွေးထွေးငြိမ်သွားတော့မှ… အားယူ ဆောင့်လိုးထည့်လိုက်တယ်။ ”’ဖောက်…အား..အား..သေပါပြီ..အမေရယ်..အား..အား.. ကျွတ်..ကျွတ်.. အမလေး.. သေပါပြီး… မလုပ်ပါနဲ့….မလုပ်ပါနဲ့”’ ပါးစပ်ကတတွတ်တွတ်ပြော..လက်က… .. လက်က.. ကျတော့ရင်ဘတ်ကို.. တွန်းထားတယ်။ ကျတော်လည်း နွားသိုးကြိုးပြတ်လို့ ရုန်းနေသလို.. မနားတမ်း.. အချက်ပေါင်းများစွာ.. ဆောင့်လိုးနေတော့.. တွန်းထားတဲ့လက်တွေ… အော်နေတဲ့ပါးစပ်က.. ငြိမ်သွားပြီး.. “”အင်း..အင်း..အား..အား..အိုး..အိုး.အု..အု..ဟင်း..ဟင်း.. အင့်..အင့်… မင်းမင်းရယ်…. မနာတော့.ဘူး.. ဆောင့်.. ဆောင့်.. ဆောင့်လိုး.. နာ..နာဆောင့်လိုး… အင်းအင်း… ကောင်းတယ်.. အမလေး.. ဟင်း.. ဟင်း.. တမျိုးကြီးပဲ..မင်းမင်းရယ်..”” ဆိုပြီး..ကျတော့ခါးကို..ဖတ်လာတယ်။
ကျတော်ဆောင့်လိုးတိုင်းလည်း.. အောက်ကနေ.. ပင့်ပင့်ပြီး.. မြောက်မြောက်နေတယ်။ ”””..နာသေးလား..ထွေး…”” “”မနာတော့ဖူး…မင်းမင်းသဘောအတိုင်း..ဆောင့်လိုး… အားမနာနဲ့.. ဆောင့်.. ဆောင့်.. ဟင့်..ဟင်.. အား.. အား..အိုး…. အိုး..ကောင်း..တယ်..”” ထွေးထွေးပြောသည့်အတိုင်း.. မရပ်မနား ဆောင့်လိုးပေးလိုက်ရာ… ကျတော်လည်း.. ပြီးချင်လာပြီ။ ထွေးထွေးကလည်း.. အတင်းကို ကော့ထိုးနေတယ်။ ပါးစပ်ကလည်း… ””..အား..အား..ကောင်းတယ်..ဆောင့်လိုးပါ..နာနာဆောင့်လိုးပေးပါ… အင်းအင်း..အီးအီး… အု..အု.. အင့်..အင့်…. အရမ်းကောင်းတယ်.. အားမနာနဲ့.. လိုး..လိုး.. အား.အား..ထွက်ပြီ..ထွက်ပြီ..အ..အ.. အ. ……”” ထွေးထွေး..ကျတော့ကို.. အတင်းဖတ်ထားရာမှ.. လက်တွေပျော့သွားပါသည်။ ကျတော်လည်း.. သုတ်ရည်များ.. ထွေးထွေးစောက်ခေါင်းထဲ.. ပန်းထည့်လိုက်ပါတော့သည်။ အစရ.တနောင်နောင်ဆိုသလို မကြာခဏ.. ချိန်းပြီးလိုးဖြစ်ကြတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ထွေးထွေးက.. သူ့တူမအိမ်မှာ.. သွားအိပ်ပေးရတယ်။ သူ့တူမယောက်ကျားက.. ခရီးထွက်သွားလို့.(၁)ပတ်လောက်ကြာမယ်။ အိမ်မှာ.. ထွေးထွေးတို့တူရီးပဲ.. ရှိတာနဲ့.. ကျတော့ကို..ချိန်းတယ်.။
မနက်စောပဲ ထွက်လာခဲ့တယ်။ အိပ်ရောက်တော့.. ”’နွေးနွေးမတွေ့ပါလား”” “”ခုနပဲ..ဈေးသွားဝယ်တယ်..”” “”မကြာသေးဘူးပေါ့.. အချိန်ရှိတုန်းလေး.. လိုးရအောင်ထွေးရယ်… မနေနိုင်တော့ဘူး..”” “”နွေးနွေးပြန်လာရင်မကောင်ဖူး..”” “”မလာခင်လေးနော်..”’ ဆိုပြီး.နှုတ်ခမ်းစုပ်လိုက်တယ်။ တဆင့်ပြီးတဆင့်.. ကာမခလုတ်တွေ.. ဖွင့်ပြီး..နောက်ဆုံး.. ထမီချွတ်မယ်လုပ်တော့.. “”ထမီ.မချွတ်နဲ့လေ.. နွေးနွေးပြန်လာရင်.. အလောသုံးဆယ်လုပ်နေရမယ်..”” သူပြောတော့လည်း.. ဟုတ်နေတာပဲ..။ ထေးထွေးကို. ဖင်ကုန်းခိုင်ပြီး.. ထမီခါးပေါ်လှန်တင်လိုက်တယ်။ ပြူးထွက်နေတဲ့.. စောက်ဖုတ်ကိုမြင်တော့.. မရတော့ဘူး။ ကုန်းပြီး.စောက်ဖုတ်ကို.. လျှာအပြားလိုက်.. လျှက်ဆားယက်သလို.. ယက်လိုက်တယ်။ “..အင်း…အင်း..မင်းမင်းရယ်..ဖုန်းနိပ်မှာပေါ့..” ပါးစပ်ကသာပြောနေတာ.. လူကငြိမ်နေတာပဲ။ အချိန်တော်တော်ကြာ.ယက်ပေးပြီး.. အရည်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့… ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်တယ်။ လီးကတော့.. ကြမ်းပြင်နဲ့ အပြိုင်ထောင်နေပြီး.. ဒူးကွေးပြီး အဖုတ်ဝမှာတေ့.. မထည့်သေးပဲ.. မွှေလိုက်သေးတယ်။ ထွေးထွေးခဗျာ… မချင့်မရဲနဲ့… “”ဟင်း..ဟင်း..မင်းမင်း..ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ..လိုးတော့လေ… မရတော့ဘူး…ထွေးကို.. လိုးပေးပါတော့နော်..”” ထွေးအရမ်းခံချင်နေပြီဆိုတာသိတော့.. အဖုတ်ဝမှာတေ့.. ဆောင့်လို့ထည့်လိုက်တယ်။
“”ဗျိ.ဗျိ..ဒုတ်..ဒုတ်..ဘွတ်..အား..အမေရဲ့..နာလိုက်တာ.. ကြမ်းလှချည်လား..မင်းမင်းရယ်… အား.. အား..အင့်.. အင့်..အူး..ဟီး…. ဟီး.. ကျွတ်.. ကျွတ်…” ခါးကကိုင်..ဆောင့်လိုးနေတယ်။ အဆုံးထိဝင်ပြီး.. သားအိမ်ကို.. ထိုးထိုးမိနေတယ်။ ကပ်ဆောင်နေတော့ .. သူ့တင်ပါးနဲ့. ကျတောင်ပေါင် ရိုက်ချက်တွေက.. တဖက်ဖက်မည်နေတယ်။ ဆောင့်လိုး.. ဆောင်လိုးနဲ့.. အချိန်တော်တော်ကြာသည်အထိ.. မပြီးနိုင်ဘူး။ ထွေးထွေးကလည်း.. လေးဘက်ထောက်ထားရာမှ မျက်နှာကိုကြမ်းပြင်ကပ်.. ဖင်ကို အသားကုန်ထောင်ထားပေးတယ်။ ဖင်ကြီးထောင်တက်လာတော့.. တင်ပါးတွေကို ဘယ်ပြန်.. ညာပြန်ရိုက်လိုက်တယ်။ “”‘အ..အ..အင်း..အင်း…အီး.အီး.. ဘွတ်..ဗြွတ်.. မင်းမင်း.. အ..အ..ကောင်းတယ်… အ..အ.. အမလေး….လိုးပါ… ဆောင့်ပေးပါ….. ထွေးကို မညှာနဲ့…. လိုးးလိုး…အား..အား.အင်း.. အင်း.. ကောင်းတယ်…ဟီး..”” ကျတော်..တင်ပါးတွေကို..ရိုက်လည်းရိုက်.. စောက်ဖုတ်ကို ဆောင့်လည်းဆောင့်နေတော့.. ထွေးထွေးက.. ကာမစိတ်.. အရမ်းထန်နေပြီလေ။ ဆောင့်လိုးလို့.. ကောင်းနေတုန်းပဲ… လူရိပ်တခုတွေ့လိုက်တယ်။ နွေးနွေးပြန်လာတာပဲ ဖြစ်မယ်… ကျတော်တို့လိုးနေတာကို.. ကြည့်နေတာပဲ ဖြစ်မည်.. မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး လီးကို အဆုံးထိထုတ်ပြီးမှ.. အဆုံးပြန်သွင်းနဲ့ လိုးပြနေလိုက်တယ်။
သူလည်း.. သူ့ယောက်ကျားမရှိတော့.. ဆာနေမှာပေါ့။ “”ဘွတ်..ဘွတ်..ပြွတ်..စွတ်..စွတ်..အား.. အား.. အင်း.. အင်း.. အို..အို..ဟား.. ဟင်း..အင်.. အင်.. ကောင်းတယ်မင်းမင်းရယ်.. မရပ်နဲ့..အဲလို ဆောင့်လိုးပေး… ဟုတ်တယ်..ဟုတ်..အား..အား.. အင်း..ဗျိ.. ဒုတ်..အ..အမလေး..ကျွတ်..ကျွတ်… ဟင်း.. ဟင်း..ပြီးတော့မယ်..ပြီးတော့မယ်… အား..အား.. အို့…အမလေး..ကောင်းလိုက်တာ.. ကောင်းလိုက်….. လိုးလိုးလိုး..အားးးး!!!!!” ထွေးထွေးလည်းပြီး.. ကျတော်လည်း..ပြီးနဲ့.. နှစ်ယောက်စလုံး.. ပြိုင်တူပြီးသွားကြပါသည်။ နွေးနွေးက.. ခုမှပြန်လာတဲ့ပုံစံဖမ်းပြီး.. ‘”‘ဒေါ်လေးတို့.ဗိုက်ဆာနေပြီလား..”” “”မဆာပါဘူးဟယ်.. ဒေါ်လေးကူလုပ်ပေးမယ်..”” ဆိုပြီး.. နောက်ဖေးမီးဖိုချောင်ထဲ အတူဝင်သွားကြတယ်။ သူတို့နှစ်ဦး အထဲဝင်သွားကြတာ ကြည့်လိုက်တော့.. နွေးနွေးဖင်မှာ. အကွက်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ တူမက.. အဒေါ်ထက်.. ဖင်သားကြီးများပိုကြီး၍ တုန်ခါနေတာ တွေ့ရတယ်။ ချက်ပြုတ်စားသောက်ပြီးတော့ ကျတော်လည်း ပြန်ခဲ့တယ်။ နောက်နေ့လာခဲ့ဖို့ မှာလိုက်သေးတယ်။ ကျတော်က.. ဒါမျိုးကြတော့.. ဝိရိယကောင်းတယ်။ အိမ်မှာလုပ်စရာရှိသည်များ လုပ်ပြီး.. ထွက်ခဲ့တယ်။ နွေးနွေးတို့အိမ်ရောက်တော့.. နွေးနွေးက ရေချိုးနေတယ်။ “”ထွေးထွေးရော..နွေးနွေး..”” “ဒေါ်လေးအမေ.. နေမကောင်းလို့.. ပြန်သွားတယ်.. ညနေပြန်လာခဲ့မယ်.. စောင့်နေလို့.. မှာသွားတယ်..”” “”ဪ..အေး..အေး… ငါဘာလုပ်ပေးရဦးမလဲ…”” “”ရပါတယ်..နွေးလည်း.. ဒါလေလျော်ပြီးရင်.. ပြီးပြီ… အိမ်ပေါ်တပ်ထိုင်နေလေ…”” ကျတော်..ထိုင်နေတုန်း.. ”ဗိုင်း”..ကနဲ.. အသံကြားလိုက်တော့.. ပြေးဆင်းလာပြီး.. “”နွေးနွေး..ဘာဖြစ်တာလဲ..”” သူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့.. ထမီကျွတ်ပြီး.. ဖင်ထိုင်ရပ်ကြီး.. လက်တဖက်ကို.. ဆုပ်ကိုထားတာ တွေ့ရတယ်။
“”အင်း..ဟင့်..ဟင့်..လုပ်ပါဦး.. ကိုမင်းရယ်.. ထမီလည်း ဝတ်မရဘူး..ချော်လဲလို့. လက်ထောက်လိုက်တာ.. လက်.. ဘာဖြစ်သွားလည်း မသိဘူး..”” ဘယ်ကဘယ်လိုစလုပ်ရမှန်းမသိတာနဲ့.. ဂျိုင်းနှစ်ဖက်က. ကောက်ထူလိုက်တော့.. ထမီးကွင်းလုံး ကျွတ်ကျသွားတယ်။ နည်းတဲ့တင်းပါးမဟုတ်ထူး။ ခါးလေးသိမ်ပြီး.. တင်ပါးနှစ်ခုက.. အောက်တွဲကျနေတာ.. ကြည့်လို့ကောင်းနေတုန်း.. “”ကိုမင်း..ထမီဝတ်ပေးပါဦး..”” ပြောတော့.. ကဗျာကယာ.သူ့ရှေ့သွား.. ထမီကုန်းကောက်လိုက်တာ… နွေးနွေးစောက်ဖုတ်ကြီးက.. မျက်နှာရှေ့တည့်တည့်မှာ.. စောက်မွှေးတွေ ရိတ်ထားတော့.. ပြောင်ပြီးဖောင်းနေတာပဲ။ မှင်သက်ပြီး..ကြည့်နေကာမှ.. “”ကိုမင်း..လုပ်လေ..”” သူ.သတိပေးမှာ..သတိဝင်လာပြီး.. ကောက်ဝတ်မယ်လုပ်.. နို့တွေကိုမြင်ပြန်ရော.. နို့သီးလေးတွေက.. ပန်းရောင်သန်းပြီး.. လုံးမို့နေတာပဲ။ ထမီဝတ်ပေးတော့.. တခါတည်း ဝတ်လို့မရဘူး။ အကြိမ်ကြိမ်အားယူဝတ်ပေးတော့.. ကျတော့လက်နဲ့ သူနို့တွေ.. တိုက်မိတာပေါ့။ သူကလည်း မသိယောင်ဆောင်နေတယ်။
ဝတ်လို့ပြီးသွားတော့.. “”နင့်လက်ပြစမ်း..ဪ.. လက်ဆစ်လွဲသွားတာ. ဘာမှမဖြစ်ဘူး..ခဏလေး..ဖျောက်.”” “”အား.ကိုမင်း..ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ..”” “”လက်ဆစ်တည့်လိုက်တာ.. ကောင်းသွားပြီး.. ခဏနေဆေးလူးလိုက်.. ကဲ..ငါရေလောင်းပေးမယ်.. နင်ရေချိုးလိုက်..”” ဆိုပြီး..ရေလောင်းပေးလိုက်တယ်။ “”..အိမ်ပေါ်သွားပြီး..ရေလဲလိုက်တော့..”” “”ကိုမင်း.. လျောက်လို့မရဘူး… တင်ပါးနာနေတယ်..”” “”ကဲ..ကဲ.လာ”” ဆိုပြီး..သူ့ဘယ်လက်ကို.. ကျတော့ပုခုံးမှာတင် သူ့ညာဘက်ဂျိုင်းအောက်က.. လက်လျိုပြီး… အိမ်ပေါ်တက်လာတယ်။ ကျတော့လက်ကလည်း.. အငြိမ်မနေဘူး။ သူ့..ညာဘက်နို့အုံကို.. ကိုင်မိနေတယ်။ အောက်က.. ငပဲကလည်း.. ထောင်နေပြီ။ အိမ်ပေါ်ရောက်တော့.. “”ထမီလဲလို့ရလား..”” ဘယ်လိုလို့ရမှာလဲ…”” “”‘မထူးပါဘူးဟာ.. ငါပဲ..အစအဆုံး လုပ်ပေးတော့မယ်…”” ထမီကိုချွတ်ချ.. ရေညှစ်လှမ်းပေးလိုက်တယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး.. ရေသုပ်. ရေစင်သွားမှ ထမီဝတ်.. ဘော်လီဝတ်..အကျီ င်္ဝတ်ပေးလိုက်တယ်။ “”အဆင်ပြေပြီလား..”” “”..ပြေတယ်..”” “”နင်ကတော့..ပြေတယ်..ငါကမပြေဘူး..”” “”ဘာမပြေတာလဲ..ကိုမင်း..”” “”မပြောချင်ပါဘူးဟာ..”” “”ပြောပါဆို..ကိုမင်းကလည်း..”” ကျတော့လက်မောင်းကို. သူ့နို့နဲ့ဖိပြီး. အတင်းမေးနေတယ်။
ကျတော်လည်း.. နွေးနွေးဘက်လှည့်ပြီး ဖတ်လိုက်တယ်။ “”ကိုမင်း..မနေနိုင်တော့ဘူး..နွေးရယ်..”” “”ကိုမင်းရယ်..မသင့်တော်ပါဘူး..”” မူနေတာ့ သိတာပေါ့။ ဘယ်ရမလဲ.. နှုတ်ခမ်းတွေ ဆွဲစုပ်.. နို့တွေကိုင်…. စောက်ဖုတ်ကိုနှိုက်လိုက်.. စောက်ရည်တွေထွက်နေပြီ။ ””ကိုမင်းရယ်.. အခန်းထဲသွားရအောင်နော်.”” “”နွေးသဘော..”” တင်ပါးက.ပွေ့ချီပြီး.. အခန်းထဲဝင်သွားတော့တယ်။ ကုတင်ပေါ်အသာလေးချ… နှုတ်ခမ်းတွေစုပ်.. လျာထိးု့ထည့်.. ကလိပေးနေလိုက်တယ်။ သိပ်မကြာပါဘူး.. တအင်းအင်းဖြစ်နေပြီ။ အကျီ င်္ ထမီတွေ ချွတ်ချလိုက်တယ်။ နို့တွေကို.. တစ်လုံးပြီးတစ်လုံ စုပ်.. နို့သီးလေးတွေချေ.. လက်ကလည်း.. နွေးနွေးရဲ့ ပြောင်သလင်းခါနေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို.. အမျိုးမျိုးကလိပေး.. စောက်စိလေးကို.. လက်ထိပ်လေးနဲ့.. ဖိဖိပြီးပွတ်ပေး.. စောက်ခေါင်းထဲ.. လက်မထည့်ပဲ.. အောက်ကနေ.. အပေါ်ဆွဲဆွဲတင်. နွေးနွေးခဗျာ… တွန့်လိမ်နေပြီ… “”အား..အား..ကိုရယ်..အင်း..အင်း..ကျွတ်..ကျွတ်..အ..အ.. ဟင်း…ဟင်း..အို..အို.. ယားတယ်.. ကိုရယ်…. ကို..ကို..ဟင်း..ဟင်း..မခံနိုင်တော့.. ဘူး…အား.. အား..လိုးပေးပါတော့… အား.. အား.. အရမ်းယားနေပြီ.. အို..အို..”” ပုဆိုးအကျီ င်္ချွတ်ပလိုက်ပြီး..လီးကိုင်ကာ.. နွေးနွေးစောက်ပတ်ထဲ.. ဆောင့်လိုးထည့်လိုက်ပါသည်။ ”’ဗျိ..ဗျိ..ဗြွတ်..ဗြွတ်..ဘွတ်..ဒုတ်…အား… အမလေး.. လေး.. ဘွတ်..ဘွတ်..စွတ်…ဗြွတ်…. အု..အု..အား.. အိုး….အား..အား..”” လိုးနေရင်း..နွေးနွေးကို.. ဒခေါက်ကွေးကနေ.. လက်နှစ်ဖက်နဲ့.. ပွေ့ချီးပြီး.. မြှောက်မြှောက်. . လိုးပေးနေတယ်။
ကျတော့ဂုတ်ကို.. လက်နှစ်ဘက်နဲ့ ဆွဲထားပြီး.. တခါခါနှုတ်ခမ်းလေးတွေ.. စုပ်လိုက်သေးတယ်။ မတ်တက်ရပ်.. လိုးရတာ.. အရမ်းအရသာရှိတယ်။ ”အား..အင်း..အင်း. အား..အား…ကို.. ကို..ဆောင့်.. ဆောင့်.. ကောင်းတယ်.. ကောင်းတယ်…. အု..အား..”’ နွေးနွေးကို..ကုတင်စောင်းမှာ.. လက်ထောက်ခိုင်း နောက်ကနေ… ဆောင့်လိုးလိုက်တယ်။ ”အမလေး.အမေရဲ့.. ဘွတ်..ဗြွတ်..ဗျိ..ဗျိ.. ဘွတ်..ပြွတ်.. စွတ်..အား..အား.. အမလေး.. အိုး.. အိုး..ကောင်းတယ်.. ကိုရယ်..အတွင်းထဲထိ.. ရောက်တယ်.. အား..အား..ဟင်း..ဟင်း.. ကျွတ်.. ကျွတ်.. ဟင်း…အိ..အိုး..လိုး..လိုး.. အရမ်းကောင်းလာပြီ… ဆောင်ပါ..ဆောင့်ပါ.. ဆောင့်လိုးထည့်ပေးပါ.. နွေးကို..မညှာနဲ့..ကို.. ဆောင့်..အား.. အား..အမလေး..ဟင်း.. ပြီး..ပြီးပြီ.. အား.အား..အားးးးးး” နွေးနွေး..ကုတင်ပေါ်.. မှောက်လျက်. ကျသွားပြီး.. ကျတော်လည်း.. စောက်ခေါင်းထဲ သုတ်ရည်ပန်းထည့်လိုက်ကာ.. နွေးနွေးပေါ်.. ထပ်လျက်.. မှိန်းနေလိုက်ပါသည်။ ခဏအနားယူပြီး .. ”ကိုရယ်..ကောင်းလိုက်တာ..နွေး.. အိမ်ထောင်ရှိပေမယ့်.. အကိုလိုးတာလောက်.. တခါမှ.. မကောင်းဘူး…နွေးကတော့.. အကို့ကို.. အရမ်းစွဲလမ်းသွားပြီ.. နောက်လဲ.. လာလိုးပေးပါနော်..” နွေးနဖူးလေးကို..ပွတ်သပ်ပြီး.. ”စိတ်ချပါနွေးရယ်.. နွေးကို.အကို..လိုးပေးမှာ.. နွေးမပူပါနဲ့.. ခုလည်း ထပ်လိုးပေးမယ်နော်.. နွေး.. ခံမှာ.. မဟုတ်လား..” “အို့..ကိုလည်း..ခံမှာပေါ့..အကို.မယားဖြစ်နေပြီလေ..” ဟား..ဟား..ဟား..သဘောကျစွာနဲ့ ရယ်လိုက်ပြီး.. ဒုတိယအကြိမ်.. လိုးရန်.. အစပျိုး စုပ်နမ်းနေပါသည်။
”နွေး..အကို့လီးကို..နမ်းပေးပါလား.” ”နမ်းပေးမှာပေါ့..ကိုရယ်.”’ ဆိုပြီး..ကျတော့ကိုပက်လက်လှန်ကာ.. ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကြားထိုင်ပြီး.. လီးအရင်းကို..ယက်ပေးပါတယ်။ လီး..ဘေးလည်ကိုလည်းယက်.. ဂွေးဥကိုလည်း.. လက်နဲ့ဖွဖွလေး. ကိုင်ပြီး..ပွတ်ပေးနေတယ်။ လီးအရင်းယက်.. ပတ်လည်ယက်.. ဂွေးဥတွေယက်နဲ့ .. လီးအချောင်းကို.. မစုပ်သေးဘူး။ ကျတော်က.. အစုပ်ခံချင်နေပြီလေ။ ခဏနေတော့.. လီးထိပ်လေးကို..အသာလေးငုံ.. လျှာနဲ့ကလိပေး… ဒစ်လေးကို..သွားနဲ့ခြစ်.. ”အ..အ..အင်း..ဟား..နွေးရယ်.လုပ်တက်လိုက်တာ” ကျတော်စိတ်ပါအောင် လုပ်နေတာနဲ့တူတယ်။ ပြီးကာမှာ. လီးကို..အဆုံးထိငုံလိုက်.. ဒစ်နဲ့..အရေပြားကြားကို.. လျှာနဲ့ကလိလိုက်.. သေးပေါက်တဲ့ အပေါက်လေးကို.. လျှာနဲ့ထိုးလိုက်နဲ့.. ကျတော့မှာ.. နေထိုင်မထိဖြစ်နေရပြီ။ ကျတော့ချစ်သူတောင် မလုပ်ပေးတဲ့.. အရာကို..နွေးနွေးက.. စိတ်ပါလက်ပါ လုပ်ပေးနေပါတယ်။ ”””နွေးရယ်..ကို..ပြီးသွားလိမ့်မယ်…. နွေးကို.. လိုးတော့မယ်နော်..”” ဆိုပြီး..တစောင်းအနေအထားနဲ့..လိုးနေတယ်။ တင်ပါကို တွန်းတွန်းလိုးတော့.. အဝင်အထွက်.. ကောင်းနေတယ်။ နို့တွေပါ..ကိုင်လိုက်.. ဆောင့်လိုက်မယ်..။
“”အိုး..အိုး..ကို..ကို..အား..အား..အင်း..အင်း.. ဟင်း..ဟင်း.. အမလေး..ဟာ့..ဟာ့.. ဟင်း..ဟင်း.. ကျွတ်..အား.. ဗျိ..ဗြစ်..ဗြစ်..ဘွတ်..ဘွတ်.. အိုး.. အား.. အား..”” “”နွေး..ကောင်းလား.”” ””ကောင်းတာပေါ့..ကိုရယ်”” နွေး..မှောက်လိုက်..နွေးဖင်ကြီး.. မို့လာအောင်.. ခေါင်အုံး..ခုလိုက်.. ပြီးတော့..တင်ပါးနှစ်ခုကိုဖြဲ.. စောက်ဖုတ်ထဲ..လီးထို့ထည့်လိုက်ပြီး..ကပ်ညှောင့်လိုးနေပါသည်။ “”..အား..အား..အင်း..ဗူ..ဘွတ်.. ဗျိ..ဗြွတ်..ဇွိ..ဇွိ.. စွပ်..အင်း.. အင်း..အား..အိုး.. ကောင်းလိုက်တာ.. ဟင်း..ကျွတ်.. ကျွတ်.. ကိုရယ်..ရင်ထဲမှာ.. တမျိုးပဲ…ကိုလိုးတာ. ဘာကိုထိနေတာလဲ မသိဘူး.. အား..အား..ဟင်း..အင်း.. ကျွတ်..ကျွတ်..အလား.. အလား.. အမလေး..ဟင်း..ဟင်း..ကောင်းတယ်.. နာနာဆောင့်လိုး.. လိုး..မရပ်နဲ့..အား.. အား.. မရတော့ဘူး.. အား..အား..ဟင်း.. ကောင်းတယ်.. ကို.. ကို..အားး.အား..ထွက်တော့မယ်.. ထွက်တော့.. မယ်..အား..အား..အင်း..အင်း.. ဆောင့်.. ဆောင့်.. အား..အား..ထွက်ပြီ… ထွက်.. ထွက်.. အား..အား..”” နွေးနွေးဘာမှာ.. မညည်းညူနိုင်တော့ပဲ.. ငြိမ်သက်သွားပါတော့သည်။ ညနေရောက်တော့. .ထွေးထွေးက..ပြန်လာသည်။ “”’ကိုမင်း..ရောက်နေတာ..ကြာပြီလား..”” “”မနက်တည်းကရောက်နေတာ..”” “”ကိုမင်း..ပျင်းနေမှာပေါ့…”” “”မပျင်းပါဘူး..နွေးနွေးရှိနေတာပဲ..”” နွေးနွေးဝင်ပြောလာသည်။ “”’ဒေါ်လေးတို့..အခန်းထဲသွားပြီး.. လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောကြလေ..”” “”ဟုတ်သားပဲ..ချစ်သူလေးကို.. အလွမ်းသယ်ရဦးမှာ”” ဆိုပြီး..ထွေးထွေးကို.. ကျတော်ဦးဆောင်ပြီး.. အခန်းထဲ ခေါ်သွားပါသည်။
အခန်းထဲ ရောက်တာနဲ့… ထွေးထွေးကိုဆွဲလှဲပီး လုပ်ငန်းစပါတော့သည်။ “”ကိုမင်းကလည်း.. အိမ်ရှေ့မှာ.. နွေးနွေးရှိတယ်လေ..”” “”ရှိရှိပေါ့..သူလည်းအိမ်ထောင်သည်ပဲ.. ဒီလောက်တော့.. နားလည်ပါတယ်..”” ထွေးထွေးကိုနူးနှပ်ပြီး.. စလိုးပါတော့တယ်။ လိုးနေရင်း.. ထွေးထွေးစအိုကိုမြင်တော့.. လိုးချင်တာနဲ့.. လီးကိုစောက်ဖုတ်ထဲက.. ချွတ်လိုက်ပြီး.. တံထွေးစွတ်ကာ.. လိုးထည့်လိုက်ပါသည်။ “”အား..အား..အမလေး.. ကိုမင်း. .ဖင်ကို မလုပ်နဲ့လေ.. ”” “”ကျတော်လိုးချင်လို့ပါ.. ခဏလေး..”” “”မရဘူ..မရဘူ..မလိုးနဲ့..”” “”လိုးချင်လို့ပါ ထွေးရယ်နော်..”” “”နာတယ်..နာတယ်..မလုပ်နဲ့..ခွင့်မပြုဘူး. ချွတ်.. ချွတ်…”” ထွေးထွေးနဲ့.အခြေအတင်ဖြစ်နေတုန်း.. ”’ဗြုန်း”ဆို.. နွေးနွေးက ဝင်လာပါတော့တယ်။ “”.ကိုမင်း..နွေး..ဖင်ကိုလိုး..”” ဆိုပြီး..ထွေးထွေးနဲ့အပြိုင်.. ကုန်းပေးပါတယ်။ ထွေးထွေးက.မျက်လုံးပြူးပြီး.. နွေးနွေးကို.. ကြည့်နေတယ်။ ကျတော်လည်း.. ကုန်းနေတဲ့.. နွေးနွေးဆီသွားပြီး…. လီးကို.. တံတွေးစွပ်…. ဖင်ဝမှာတေ့ပြီး.. ဆောင့်လိုးထည့်လိုက်ပါတော့တယ်။ “”ဗျိ..ဗျိ..ဘွတ်..ဘွတ်..အွန့်..အား..”” “”နွေးနွေးအရမ်းနာနေလား..”” “”ရပါတယ်.. ကိုမင်း..ကိုမင်း.. ပြီးအောင်လိုး… နွေး.. အံကြိတ်ခံမယ်.. ဆောင့်.ဆောင့်..”” နွေးနွေးက.. အတင်းဆောင့်ခိုင်းနေတာနဲ့.. မရပ်မနား ဆောင့်လိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ “”’.အား..အား..အင်း..အင်း..ဟင်း..ဟင်း..ဘွတ်..ဗြွတ်.. အင့်..အင့်..အား..အား..အိုး..အိုး.. ကောင်းတယ်.. လိုး.. လိုး..အား..အမလေး.. ကောင်းတယ်.. ဆောင့်.. ဆောင့်.. ကိုမင်း စိတ်ကြိုက်ဆောင့်. .အားမနာနဲ့.. အား.. အား.. အမလေး.. အား..အား….”” ကျတော်လည်း..စီးပိုင်နေတဲ့.. ဖင်စအိုကို.. လုပ်နေရတော့.. အရမ်းကိုကောင်းနေပြီ။
စအိုကြွက်သားတွေက.. လီးကို.. ညှစ်ညှစ်သလို ဖြစ်နေတော့.. မရတော့ဘူး။ လီးက..ပိုပို.. မာကြောလာတယ်။ ဆက်လက်သုတ်ထိန်းနိုင်စွမ်း မရှိတော့ပဲ… နွေးနွေးဖင်ထဲ ပန်းထည့်လိုက်ပါတော့သည်။ ကိစ္စအားလုံပြီးသွားတော့.. နွေးနွေးက.. “”ဒေါ်လေး..နွေးကို..ခွင့်လွတ်ပါနော်.. နွေးလည်း.. မနေနိုင်လို့ပါ..”” “”ရပါတယ်..နွေးနွေးရယ်…ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စကို.ထိမ်းချုပ်လို့မှ မရတာ.. နွေးနွေးလည်း.. ယောက်ကျားမရှိတော့.. ခံချင်မှာပေါ့.. ဒို့ကိစ္စတွေကို.. ဘယ်သူမှ..မသိဖို့ပဲ.. လိုတယ်.. ကိုမင်းလည်း.. နွေးနွေးခံချင်ရင်.. လိုးပေးလိုက်ပါနော်..”” ကျတော်တို့.၃.. ယောက်စလုံး..နားလည်မှုတွေယူ… ချိန်းလိုးဖြစ်ကြပါတယ်။ ထွေးထွေးက.. ကျတော့ရည်းစားဦးပါ။ အထိုက်အလျောက် လိုက်လျောပေးပေမယ့် ကျတော့ဆန္ဒအားလုံးကို.. အငြူစူပဲ.. အရာအားလုံးဖြည့်ဆည်းပေတဲ့.. နွေးနွေးကတော့… ကျတော့ရဲ့.. အချစ်ဦးမဟုတ်ပေမယ့်.. အချစ်ဆုံးအဖြစ်.. ကျတော့ရင်ထဲမှာ.. မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတော့သည်……… ပြီးပါပြီ။